भारतमा महामारी झन् उग्र हुँदै: भारतमा देखिएको डरलाग्दो महामारीका लागि अन्य कारक पनि हुन सक्ने वैज्ञानिक तर्क « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
‘कोभिड–१९ को यो लहरमा भाइरसको फरक क्लिनिकल व्यवहार देखिएको छ,’ सर गंगाराम अस्पतालका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. संजय साद भन्छन्. उक्त अस्पतालमा कार्यरत २ जना संक्रमित चिकित्सकलाई निको पार्न अतिरिक्त अक्सिजन दिनुपरेको थियो। ‘पछिल्लो महामारीले युवालाई असर गरेको छ, पूरै परिवारलाई असर गरेको छ। यो समग्रमा नौलो कुरा हो। यहाँसम्म कि २ महिनाका बालबालिकामा पनि संक्रमण देखिएको छ,’ डा. साद भन्छन्।
भारतमा महामारी झन् उग्र हुँदैछ। बिहीबारमात्रै ३६ सयको मृत्यु भएको छ। भारतमा कुल मृतकको संख्या २ लाख नाघेको छ। विज्ञले मृतकको संख्या अझ बढी हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। भारतमा दैनिक संक्रमण ४ लाख नाघेको छ।
उता मानिसहरूको भनाइलाई आधार मान्दै भारतका कतिपय चिकित्सक खोपका दुवै मात्रा लगाएका पनि बिरामी भएको तर्क गर्छन्। बालबालिकामा पनि झाडापखालाजस्ता गम्भीर संक्रमण देखिएको र युवामा रक्तचाप अत्यन्त कम भएको लक्षण देखिएको ती चिकित्सक बताउँछन्। ‘हालको महामारी गत वर्षको भन्दा नितान्त फरक छ,’ मुम्बईस्थित एक बाल अस्पतालका चिकित्सक डा। सोनी उदानी भन्छन्। भारतमा दुईपटक उत्परिवर्तन भएको प्रजाति ९डबल म्युटेन्ट० लाई महामारी विस्तारमा जिम्मेवार मानिने गरिएको छ। सीमित अध्ययनले के देखाएको छ भने भाइरसका फरक भेरियन्ट भारतका फरकफरक राज्यमा देखिएका छन्। उदाहरणका लागि बी.१.६१७ महाराष्ट्रमा अत्यधिक देखिएको छ भने बी.१.१.७ नयाँ दिल्लीमा बढी देखिएको छ। भारतका नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका निर्देशक डा. सुजित सिंहका अनुसार मार्चमा अध्ययन गरिएका ५० प्रतिशत नमुनामा यो भेरियन्ट पुष्टि भएको थियो। उक्त अध्ययनभन्दा २ साताअघि गरिएको अध्ययनमा यो भेरियन्ट २८ प्रतिशतमा देखिएको थियो। डा. सिंह दिल्लीमा यो भेरियन्ट प्रसार भइरहेको तर्क गर्छन्। तर उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा नतिजामा पुग्न कठिन छ। संक्रमणको यति ठूलो स्तर भए पनि भारतमा भाइरसको आनुवांशिक सिक्वेन्स अध्ययन अत्यन्त कम भएको छ। गत डिसेम्बरमा १० प्रयोगशालामार्फत कुल संक्रमितमध्ये ५ प्रतिशतको नमुना संकलन गरेर हरेक महिना अध्ययन गर्ने भारत सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर एक प्रतिशतभन्दा कम नमुनाको मात्र अध्ययन हुन सकेको छ।
पुनः सक्रमित भएका नयाँ दिल्लीको गंगाराम अस्पतालका ३७ चिकित्सकले जनवरीको अन्त्यतिर अथवा फेब्रुअरीको सुरुमा पहिलो डोज अस्ट्राजेनेका खोप लगाएका थिए भने ४ देखि ६ सातापछि दोस्रो डोज लगाएका थिए। उक्त अस्पतालमा ५ सय चिकित्सक कार्यरत छन्। मुटु विशेषज्ञ डा। साद भाइरसका नयाँ भेरियन्टले खोपलाई निष्प्रभावी पारेको नतिजामा पुग्न हतार गर्न नहुने ठान्छन्। ‘कसैसँग यो कुरालाई पुष्टि गर्ने डाटा छैन,’ उनी भन्छन्।